My freedom: Christmas Party @ Work
ဒီဇင်ဘာဆိုတာ ကန်ဒီတစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်တဲ့လဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Christmas ဆို အလုပ်က လူတိုင်းကို ကန်ဒီက လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးတတ်တော့ အဲ့ဒါအတွက် Shopping ထွက်ရတယ်။ Goodies Bag လေးတွေအတွက် Snacks လေးတွေ ၀ယ်ရတယ်။ လက်ဆောင်လှလှလေးဖြစ်အောင် ထုတ်ရတယ်။ Note လေးတွေ ရေးရတယ်။ အဲ့ဒါတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ နောက်လကုန်မှာလာမယ့် စာမေးပွဲအတွက် စာတောင် မကြည့်ရသေးဘူး ဟဟ
ဒါတွေအားလုံးက Vegan Snacks တွေဆို ယုံမလား?! Cookies တွေမှာတောင် နို့နဲ့ကြက်ဥ မပါဘူး။ Fair Price မှာတင် ၀ယ်လို့ရတယ်။ အဲ့လောက် ခက်ခက်ခဲခဲကြီး ရှာစရာမလိုဘူး။ လက်ဆောင်ထုပ်လေးတွေထဲ ထည့်ဖို့လေ။ တခြားလက်ဆောင်အနေနဲ့ဆို Body Shop က Hand cream လေးတွေ၊ Shower Gel လေးတွေ၊ Body Lotion လေးတွေ ၀ယ်တယ်။ ဆံပင်ရှည်တဲ့သူအတွက်ဆို ခေါင်းစည်းကြိုးလေးတွေ၊ ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဆို Key cover လေးတွေလည်း Online က ၀ယ်ဖြစ်တယ်။
အားလုံး Pack ပြီးတော့ ဒီလိုလေးတွေပေါ့။ လှမှလှနော်။ အလုပ်မှာ Christmas Party လုပ်တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က အဲ့ဒါတွေအကုန်ယူသွား၊ သူတို့မလာခင် သူတို့ Locker တွေထဲထည့်၊ ဒီလိုအချိန်မျိုးဆို အဲ့လိုလုပ်ရတာကို ပျော်တာလေ။ Christmas Party က ပုံလေးတွေလည်း တင်ဦးမယ်။
Organizer က အားလုံးအတွက် Pizza မှာပေးတယ်။ ကန်ဒီက ကန်ဒီ့အတွက် သက်သတ်လွတ်သီးသန့်လုပ်ပေးစရာမလိုဘူး ပြောထားတာတောင် တစ်ယောက်က Indian spices တွေနဲ့ Quinoa ချက်လာပေးတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က Pumpkin Salad လုပ်လာပေးတယ်။ Salad ထဲမှာ ကန်စွန်းဥ၊ ရွှေဖရုံသီး၊ သခွားသီး၊ ဆလတ်ရွက်၊ အသားတု.. စုံနေတာပဲ၊ Salad Dressing မပါဘဲကို ချိုပြီး စားကောင်းနေတာ။ ကန်ဒီကတော့ Vegan Pizza အကြီးတစ်ချပ် ၀ယ်သွားတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ရော.. သူများတွေကိုပါ Try စေချင်လို့လေ။
သက်သတ်လွတ်ပီဇာ (Vegan Pizza)
အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်လုပ်တာဆိုတော့ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့စားတာ အလုပ်ကလူတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတောင် သေချာမရိုက်လိုက်ရဘူး။ အစားအသောက်ပုံတွေပဲ ပါလာတယ် ဟဟဟ။ အဲ့နေ့က အပျော်ဆုံးကတော့ ကန်ဒီတို့ Clinic Pharmacy Manager ဆီက လက်ဆောင်ရတာကိုပဲ။ ကိုယ့်ကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ သတိရတယ်ဆိုကတည်းက သူ့စိတ်ထဲ ကိုယ်ရှိတယ်လို့ ယူဆရတယ်လေ။ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောလည်း သက်ရောက်တယ်။
Present from Boss
စာရေးတဲ့အချိန်တွေမှာရော၊ မရေးတဲ့အချိန်တွေမှာပါ လာလည်ကြတဲ့ စာဖတ်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..
Mask Review + Tips for Acne Prone Skin